के भारत एक ऐतिहासिक विद्युत संकटमा छ ? « News24 : Premium News Channel
के भारत एक ऐतिहासिक विद्युत संकटमा छ ?
एजेन्सी । भारतमा आगामी समयमा अप्रत्याशित बिजुली संकट उत्पन्न हुन सक्छ। भारतमा १३५ कोइलाबाट सञ्चालित बिजुली संयन्त्रहरु छन्, जसमध्ये आधा भन्दा बढी धुवाँमा चलिरहेका छन् किनकि कोइलाको भण्डार गम्भीर रूपले समाप्त भएको छ।
भारतमा, कोइलाबाट ७० प्रतिशत भन्दा बढी बिजुली उत्पादन गरिन्छ, त्यसैले यो चिन्ताको विषय हो किनकि यसले अर्थव्यवस्थालाई बिगार्न सक्छ जुन महामारीपछि ट्र्याकमा फर्किन सक्छ।
यस्तो किन भैरहेको छ?
यो संकट धेरै महिनादेखि चलिरहेको छ। कोभिड महामारीको दोस्रो लहरपछि, भारतको अर्थव्यवस्था फस्टाएको छ र बिजुलीको माग पनि अचानक बढेको छ।
२०१९ को तुलनामा पछिल्लो दुई महिनामा बिजुलीको खपत १७ प्रतिशतले बढेको छ। यसैबीच, विश्वव्यापी रूपमा कोइलाको मूल्य ४० प्रतिशतले बढेको छ जबकि भारतको कोइला आयात दुई वर्षमा सबैभन्दा कम स्तरमा छ।
यद्यपि भारतमा संसारको चौथो ठूलो कोइला भण्डार छ, तर उपभोगका कारण भारत कोइला आयातमा विश्वमा दोस्रो स्थानमा छ।
बिजुली प्लान्टहरु जो सामान्यतया आयातित कोइलामा चल्छन् अब देशमा उत्पादित कोइला मा निर्भर छन्।
यसले पहिले नै कमी भएको कोइला आपूर्तिलाई झन् धेरै दबाबमा राखेको छ।
विशेषज्ञहरुको विश्वास छ कि अधिक कोइला आयात गरेर आवश्यकताहरुलाई पूरा गर्नको लागि यो समय भारतको लागि एक राम्रो विकल्प छैन।
नोमुराका उपाध्यक्ष तथा भारतीय अर्थशास्त्री ओरोदीप नंदी भन्छन्, ‘हामीले कोइलाको अभाव पहिले देखेका थियौं, तर यस पटक अभूतपूर्व कुरा कोइला धेरै महँगो छ। यदि म एक कम्पनी हुँ र म एक महंगा मूल्यमा कोइला किन्दै छु तब म मेरो मूल्य बढाउनेछु, के यो हुनेछ? व्यवसायहरु अन्ततः ग्राहकलाई लागतमा पास, त्यसैले यो मुद्रास्फीतिको लागि नेतृत्व गर्न सक्छ ( दुबै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा)। ‘
यदि यो संकट यथावत रह्यो भने उपभोक्ताहरु बिजुलीको मूल्य बृद्धिबाट प्रभावित हुन सक्छन्। वर्तमानमा, भारतमा खुदरा मुद्रास्फीति पहिले नै उच्च छ किनकि तेलदेखि आवश्यक सबै चीज महंगो भएको छ।
भारत रेटिंग्स रिसर्चका निर्देशक विवेक जैन भन्छन्, स्थिति धेरै अनिश्चित छ। भारतले हालैका वर्षहरुमा कोइला माथिको आफ्नो निर्भरतालाई कम गर्नको लागि पर्यावरण प्रति आफ्नो प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न कोसिस गरेको छ। भारतमा कोइला उत्पादन पनि घटेको छ।
नाम नछोड्ने एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले बीबीसीलाई भने कि परिस्थिति चिन्ताजनक छ।
भारतको ८० प्रतिशत कोइला उत्पादन गर्ने सरकारी स्वामित्वको कम्पनी कोल इन्डिया लिमिटेडका पूर्व प्रमुख जोहरा चटर्जीले चेतावनी दिए कि यदि स्थिति यस्तै रह्यो भने एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र पछाडि फर्कन संघर्ष गर्ने छ।
जोहरा भन्छन्, ‘सबै कुरा बिजुलीमा चल्छ, त्यसैले सम्पूर्ण उत्पादन क्षेत्र ( सिमेन्ट, स्टील, निर्माण) सबै कोइलाको अभावबाट प्रभावित हुन्छन्।सबै कुरा बिजुलीमा चल्छ, त्यसैले सम्पूर्ण उत्पादन क्षेत्र ( सिमेन्ट, स्टील, निर्माण, सबै कोइलाको अभावबाट प्रभावित हुन्छन्।’
सरकारले के गर्न सक्छर?
हालैका वर्षहरुमा, भारत कसरी आफ्नो १४० करोड जनसंख्याको आवश्यकताहरुलाई पूरा गर्न सक्छ र कसरी भारी प्रदूषण कोइलामा निर्भरता कम गर्नको लागि, भारत सरकारहरुको लागि एक चुनौती भएको छ।
डा नंदी भन्छन् , ‘ यो समस्या यति ठूलो छ कि यसको लागी कुनै छोटो अवधिको समाधान पाउन सकिदैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि यसको धेरै फराकिलो दायरा छ। हाम्रो बिजुली को एक ठूलो हिस्सा थर्मल पावर (कोइला)बाट आउँछ। मलाई लाग्दैन कि हामी अब यस्तो चरणमा पुग्यौं कि त्यहाँ कुनै प्रभावकारी विकल्प छैन। थर्मल पावर। म सहमत छु कि यो भारत को लागी एक चेतावनी हो र भारत होशियार रहनु पर्छ। तर मलाई लाग्दैन कि हाम्रो ऊर्जा कोइला मा निर्भरता कुनै पनी चाँडै समाप्त हुनेछ। ‘
विशेषज्ञहरु को विश्वास छ कि भारत एक सम्भावित दीर्घकालीन समाधान को लागी कोइला र स्वच्छ उर्जा स्रोतहरु अपनाउने को एक मिश्रित नीति को पालन गर्नु पर्छ।
जैन भन्छन्, ‘नवीकरणीय ऊर्जामा पूर्ण रूपले सर्न सम्भव छैन र १००५ नवीकरणीय ऊर्जामा भर पर्नु बिना कुनै ठोस ब्याक अप पनि सही रणनीति हुनेछैन।’
अर्कोतर्फ, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी जोहरा चटर्जी विश्वास गर्छन् कि वर्तमान संकट जस्तो स्थिति धेरै ऊर्जा स्रोतहरुमा दीर्घकालीन लगानी गरेर र सही योजना बनाएर बच्न सकिन्छ।
उनी विश्वास गर्छन् देशको सबैभन्दा ठूलो कोइला आपूर्तिकर्ता कोल इंडिया र अन्य सरोकारवालाहरु को बीच अझ राम्रो समन्वय को आवश्यकता छ। अन्तिम स्तर सम्म सहज वितरण र बिजुली कम्पनीहरुको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिनु पर्दछ।
चटर्जी भन्छन्, ‘बिजुली उत्पादकहरूले कोइलाको भण्डार पनि राख्नुपर्छ, उनीहरुको सधैं भण्डारणको निश्चित सीमा हुनुपर्दछ। तर हामीले देख्यौं कि यस्तो भएको छैन किनकि कोइलाको यति ठूलो मात्रामा ब्यवस्थापन गर्दा आर्थिक चुनौतिहरु हुनेछन्।’
यो स्पष्ट छैन कि वर्तमान स्थिति कहिले सम्म रहन्छ तर नंदी आशावादी छन् कि चीजहरु अझ राम्रो हुनेछन्।
‘मानसूनको अन्त्य र जाडो नजिकिंदै जाँदा, बिजुलीको खपत सामान्यतया कम हुन्छ र बिजुलीको आवश्यकता र आपूर्ति बिचको अन्तर केहि हदसम्म कम हुन सक्छ,’उनी भन्छन्।
यो स्पष्ट छैन कि वर्तमान स्थिति कहिले सम्म रहन्छ तर नंदी आशावादी छन् कि चीजहरु अझ राम्रो हुनेछन्। ‘मानसूनको अन्त्य र जाडो नजिकिंदै जाँदा, बिजुलीको खपत सामान्यतया कम हुन्छ र बिजुलीको आवश्यकता र आपूर्ति बिचको अन्तर केहि हदसम्म कम हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्।
विवेक जैन भन्छन्, ‘यस्तो स्थिति संसारमा छ, भारतमा मात्र सीमित छैन। यदि आज ग्यासको मूल्य घट्यो भने मानिसहरु धेरै ग्यासको प्रयोग गर्न थाल्छन्। यो परिवर्तनशील स्थिति हो।’
वर्तमानमा, भारत सरकार को उत्पादन को वृद्धि र अधिक खनन को लागी कोल इंडिया संग काम गरीरहेको छ भनेर भनिएको छ कि आपूर्ति र खपत को बीच को अंतर कम गर्न सकिन्छ।
सरकारले बन्धक बनेका खानीहरुबाट कोइला पाउने आशा पनि गरेको छ। यी खानीहरु हुन् जो कम्पनीहरु को नियन्त्रण मा छन् र ती कम्पनीहरु मात्र उनीहरु बाट उत्पादित कोइला को उपयोग गर्दछन्। यी खानीहरुलाई सरकार संग भएको सम्झौता अनुसार कोइला बेच्न अनुमति छैन।
विशेषज्ञहरु सहमत छन् कि भारत कुनै पनी छोटो अवधिको उपायहरु संग वर्तमान संकट बाट बाहिर निस्कन सक्छ, तर देशको बढ्दो ऊर्जा आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न को लागी, भारत लाई दीर्घकालीन विकल्पहरुमा लगानी तिर काम गर्नु पर्छ।
विश्वभरका अर्थव्यवस्था हालैका दशकहरुमा सबैभन्दा ठूलो गिरावट को सामना गर्नु परेको छ र भारत पनि आफ्नो अर्थव्यवस्था लाई ट्रयाक मा ल्याउन को लागी कोशिश गरीरहेको छ। यस्तो स्थितिमा, भारत आफ्नो बाटोमा बाधाहरु आउन चाहँदैन।